Bitcoin, ကဘာလဲ, ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်နှင့် Bitcoins ဝယ်ဖို့ဘယ်မှာ | Gadget သတင်း
Bitcoin, ကဘာလဲ, ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်နှင့်ဘယ်မှာ Bitcoins ဝယ်ဖို့
Miguel Gaton | | Cryptocurrencies, NOTICIAS, နည်းပညာ
ကျွန်ုပ်တို့သည် Bitcoins အကြောင်းနှစ်များစွာကြားသိခဲ့ရပြီးဖြစ်သည်သာမကသတင်းများသာမကရုပ်မြင်သံကြားလိုင်းများတွင်ပါပါ ၀ င်ခဲ့သည်။ ပြproblemနာကအများအားဖြင့်၊ အထူးသဖြင့်ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေမှာ၊ Bitcoins သည်အမှန်တကယ်မည်သည့်အရာနှင့်၎င်းတို့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သည်ဆိုသည်ကိုပုံပျက်နေသည်။ Bitcoin ဒါက virtual ငွေကြေးဖြစ်ပါတယ် ၎င်းသည်မည်သည့်လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာဖြင့်မှထိန်းချုပ်ထားခြင်းမရှိ၊ ဘဏ်များတွင်သိုလှောင်ထားခြင်းမရှိသည့်အပြင်ခြေရာခံ ၍လည်း မရ၊ အထူးသဖြင့်အစောပိုင်းကာလများ၌မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်လက်နက်များရောင်းဝယ်မှုနှင့်ဆက်စပ်သည့်တရားမဝင်လုပ်ဆောင်မှုများနှင့်ဆက်စပ်နေသည် ငါတို့ရှိသမျှသည်အကျွမ်းတဝင်) ။ သို့သော်ဤအကြွေစေ့အသစ်ကိုအနည်းငယ်ပိုမိုနက်နက်နဲနဲလေ့လာလျှင်၎င်းသည်ဝေးလံခေါင်ဖျားသည့်အနာဂတ်တွင်သုံးစွဲသူများကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသောအကြွေစေ့ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နိုင်သည်။
ထို့အပြင် Bitcoin သည်၎င်း၏စျေးနှုန်းများကိုအံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်တိုးမြှင့်ခံစားခဲ့ရသည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့၏ငွေကိုသိသိသာသာပြန်ရလိုသူများအတွက်ကြီးမားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ယူရို ၅,၀၀၀၊ ယူရို ၁၀၀၀၀၊ ယူရို ၂၀၀,၀၀၀ …အနာဂတ်မှာအနာဂတ်ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းတဲ့ပညာရှင်တွေတောင်မှရှိတယ် Bitcoin သည်ယူရိုသန်းတစ်ရာတန်ဖိုးရှိနိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောတောင်းဆိုမှုများနှင့်ရင်ဆိုင်ခြင်း, များစွာသောလူရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအဖြစ် Bitcoin စျေးကွက်ဝင်နေကြသည်။
အလိုရှိ Bitcoin ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ? ဤနေရာတွင်ကလစ်နှိပ်ခြင်းဖြင့် Bitcoin တွင်အခမဲ့ $ 10 $ ပေးပါ
1 Bitcoin ဆိုတာဘာလဲ။
2 အဘယ်သူသည် Bitcoin ဖန်တီး?
3 တစ်ဦး Bitcoin ဘယ်လောက်ပါလဲ?
4 Bitcoins ဘယ်မှာဝယ်လို့ရပါသလဲ
5 Bitcoins ကိုသတ္တုတွင်းလုပ်နည်း
6 Bitcoins ကိုဘယ်သူထိန်းချုပ်သလဲ။
7 Bitcoins ၏အားသာချက်များ
8 Bitcoins ၏အားနည်းချက်များ
ငါအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သကဲ့သို့ Bitcoin သည်ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်ငွေပေးချေမှုပြုလုပ်ရန်ငွေစက္ကူများနှင့်ဒင်္ဂါးများမပါရှိ။ Bitcoins များကို virtual ပိုက်ဆံအိတ်ထဲတွင်သိမ်းဆည်းထားပြီးအင်တာနက်မှတဆင့်ချက်ချင်းငွေပေးချေနိုင်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်၎င်းနှင့်ဆက်စပ်သောအသုံးပြုမှုကိုချန်လှပ်ထားခြင်း၊ လက်ရှိမိုက်ခရိုဆော့ဖ်၊ Steam ဂိမ်းပလက်ဖောင်း၊ Las Vegas မှလောင်းကစားရုံများနှင့် NBA ဘတ်စကက်ဘောအဖွဲ့များသည်ပင်ဒီဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးကိုငွေပေးချေမှုပုံစံတစ်ခုအဖြစ်လက်ခံသော်လည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအရေအတွက်မှာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါ နှင့်ဤငွေကြေး၏အသုံးပြုမှုကိုမျက်နှာသာဖို့စတင်နေသောကုမ္ပဏီကြီးများတိုးပွားလာလျက်ရှိသည်။
ဤနေရာတွင်ကလစ်နှိပ်ခြင်းဖြင့် Bitcoin တွင် $ 10 အခမဲ့ရယူပါ
တိုတိုပြောရရင်ကျနော်တို့ပြောနိုင်တယ် Bitcoin သည်အပြည့်အဝဒစ်ဂျစ်တယ်၊။ မည်သည့်ဘဏ္organizationာရေးအဖွဲ့အစည်းကမှမထိန်းချုပ်ထားသောဤငွေကြေးအသစ်နှင့် ပတ်သက်၍ ဗဟုသုတနည်းပါးခြင်းကြောင့်အချို့သောနိုင်ငံများသည်ရုရှား၊ ဗီယက်နမ်၊ အင်ဒိုနီးရှားကဲ့သို့သောငွေကြေးဖြင့်လည်ပတ်ခွင့်ပြုသည့်ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုစတင်ပိတ်ဆို့နေကြသည်။ သို့သော်အမေရိကန်၊ ဘရာဇီးကဲ့သို့သောအခြားနိုင်ငံများအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပိုက်ဆံအိတ်နှင့် Bitcoins များကိုတိုက်ရိုက်ဝယ်ယူနိုင်သည့် ATM စက်များရှိပြီးဖြစ်သည်။
Ether ကဲ့သို့သောအခြား cryptocurrencies ရှိပါသည်။ Litecoin နှင့် Ripple ပေမယ့်အမှန်တရား Bitcoin ယနေ့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အရေးပါမှုနှင့်အလေးချိန်နှင့်အတူတစ်ခုတည်းသော cryptocurrency ဖြစ်ပါတယ်။
အဘယ်သူသည် Bitcoin ဖန်တီး?
၎င်း၏ဖန်တီးသူသည်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းအမှန်တကယ်သက်သေပြနိုင်ခြင်းမရှိသော်လည်း အများစုက Satoshi Nakamoto ကိုချီးမွမ်းကြသည် ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချခြင်းနှင့်အမည်မသိသောငွေကြေးကိုဖန်တီးရန်ပထမဆုံးသောအကြံဥာဏ်များကို ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင်ဝေဝေမှတည်ထောင်ခဲ့သည့်စာတိုက်တစ်ခုတွင်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ Satishi သည်သူ၏တက္ကသိုလ်မှစာမေးပွဲစာရင်းတွင် Bitcoin သဘောသဘာဝကိုပထမဆုံးစမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သူသည်စီမံကိန်းမှထွက်ပြီးမကြာမီတွင်သံသယများနှင့်ပင်လယ်ထဲသို့ Bitcoin အခြေပြုသည့်အရင်းအမြစ်အကြောင်းနားမလည်နိုင်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ နှင့်အစစ်အမှန် utility ကို။
2016 ခုနှစ်တွင်သြစတြေးလျ Craig Wright ကသူသည် Dave Kleiman နှင့်အတူဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးဖန်တီးသူဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည် (၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင်ကွယ်လွန်ခဲ့သည်) Satoshi Nakamoto ၏အမည်မှာမှားယွင်းကြောင်းနှင့်သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးအမည်ဝှက်ဖြင့်ဖုံးကွယ်ထားရန်ဖန်တီးထားသည်ဟုဖော်ပြသည်။ Craig သည် Nakamoto ဖန်တီးသောပထမဆုံးဒင်္ဂါးများနှင့်ဆက်နွယ်သော private keys များစွာကိုတင်ပြခဲ့သည်။ သို့သော်သူသည်သူဖန်တီးသူဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြရန်အချက်အလက်များမလုံလောက်သေး။ ယခုအချိန်တွင် Bitcoins ဖန်တီးသူအမည်သည်လေထဲ၌ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ။
တစ်ဦး Bitcoin ဘယ်လောက်ပါလဲ?
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က Bitcoin ၏စျေးနှုန်းသည် ၅၀၀% မြင့်တက်ခဲ့ပြီးယခုဆောင်းပါးကိုရေးသားသည့်အချိန်တွင် Bitcoin ၏စျေးနှုန်းသည်အကြမ်းအားဖြင့်ဒေါ်လာ ၂၃၀၀ ဖြစ်သည်။ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းငွေကြေးများတိုးတက်လာနေသော်လည်း ဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်လူအတော်များများကသံသယဖြစ်နေကြတုန်းပဲ၊ ၎င်းကိုပူဖောင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းသည်ဤငွေကြေးကိုအချိန်နှင့်ငွေများရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသည့်သုံးစွဲသူများအားလုံး၏ငွေကိုယူပြီးအနှေးနှင့်အမြန်ပေါက်ကွဲလိမ့်မည်။
သင် Bitcoin တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုပါသလား။
၎င်း၏မျက်နှာသာအတွက်အချက်တစ်ခုဖြစ်သည် ၎င်းကိုထိန်းညှိ။ ထိန်းချုပ်နိုင်သောမည်သည့်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တွင်မမှီခိုပါဒါကြောင့်အသုံးပြုသူများနှင့်မိုင်းလုပ်သားတွေသာဖြစ်ဖို့၊ တစ်ရက်ပြီးတစ်ရက်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအရေအတွက်အတူတကွသူတို့ရဲ့ဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုနဲ့ကျဆင်းမှုကိုသြဇာသက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ Bitcoins များ ၀ ယ်ရန်နှင့်ရောင်းရန်ခွင့်ပြုသော application များသို့မဟုတ် ၀ က်ဘ်စာမျက်နှာများသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်ငွေပေးငွေယူကိုကျွန်ုပ်တို့လုပ်ချင်သည့်အချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုးကားချက်ကိုကမ်းလှမ်းသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့ရရှိမည့် Bitcoins အရေအတွက်ကိုအချိန်တိုင်းသိရန်။ သင် Bitcoins ကိုဝယ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်ုပ်တို့၏ထောက်ခံချက်မှာသင်သည် Coinbase ကဲ့သို့ခိုင်မာ။ လုံခြုံသော platform တစ်ခုကိုအသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။ ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ Coinbase နှင့်အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ပြီးသင်၏ပထမဆုံး Bitcoins ကိုဝယ်ရန်။
Bitcoins ၏တန်ဖိုးသည်တစ်နှစ်အတွင်းသိသိသာသာကွဲပြားနိုင်သော်လည်း ပို၍ ပို၍ များလာသည် ဒီ cryptocurrency ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်စိတ်ဝင်စားနေသောအသုံးပြုသူများသည်။ လတ်တလောအင်တာနက်ပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ကို Bitcoins တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ခွင့်ပြုသည့်ဝက်ဘ်စာမျက်နှာအမြောက်အများကိုတွေ့နိုင်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိနိုင်သောအရာများစွာတို့မှာအများစုသည်ငွေကိုသာပြန်ပေးစရာမလိုဘဲကျွန်ုပ်တို့၏ငွေကိုသာထားချင်ကြသည်။ Coinbase ကိုမီးမောင်းထိုးပြသည်။ ၎င်းသည်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုမရှိသောနှင့်အမည်မသိငွေကြေးကိုအစကန ဦး ကတည်းကပြုလုပ်ခဲ့သည်။
သို့ Coinbase မှတဆင့် Bitcoins ဝယ်ကြလော့ ကျနော်တို့ရပါမည် iOS သို့မဟုတ် Android လည်ပတ်မှုစနစ်တစ်ခုစီအတွက်သက်ဆိုင်သည့် application များကို download လုပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့မှတ်ပုံတင်ပြီးရိုးရှင်းသောအတည်ပြုခြေလှမ်းအနည်းငယ်ကိုပြီးဆုံးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဏ်အကောင့်အချက်အလက်များကိုဖြည့်စွက်ပြီးကျွန်ုပ်တို့သည်ဤ ၀ န်ဆောင်မှုပေးထားသောပိုက်ဆံအိတ်တွင်သိမ်းဆည်းမည့် Bitcoins၊ Bitcoins များကိုစတင် ၀ ယ်နိုင်သည်။ သူတို့ရဲ့စျေးကွက်ပေါက်စျေးကလက်ရှိစျေးနှုန်းထက်ပိုမိုမြင့်မားသည်အထိသည်အထိအကြွေစေ့များသိုလှောင်ထားပါ။
နှစ်ခါမတွေးပါနှင့် Bitcoin တွင် $ 10 အခမဲ့ရယူပါ။ ဤနေရာတွင်ကလစ်နှိပ်ခြင်းဖြင့်
တူညီသောလျှောက်လွှာ၌တည်၏ ကျနော်တို့လျင်မြန်စွာ Bitcoin ၏တန်ဖိုးကိုရနိုင်သည် ၀ ယ်ယူခြင်းသို့မဟုတ်ရောင်း ၀ ယ်သည့်အချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ငန်းစဉ်မစတင်မီအခြားဝက်ဘ်စာမျက်နှာများနှင့်ဆွေးနွေးရန်မလိုအပ်ပါ။ ယေဘုယျစည်းမျဉ်းအရ Bitcoin ၏တန်ဖိုးကိုဒေါ်လာဖြင့်ဖော်ပြထားသည်။ ထို့ကြောင့်ငွေကြေးကိုယူရိုငွေဖြင့်မဟုတ်ဘဲဒေါ်လာဖြင့်ဝယ်ယူရန်အကြံပြုလိုသည်။ မဟုတ်ပါကငွေပေးချေမှုကိုပြုလုပ်ရန်ဘဏ်မှပြုလုပ်သောအပြောင်းအလဲများနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်ငွေဆုံးရှုံးလိုကြသည်။
Coinbase: BTC, ETH, SHIB လဲလှယ်ပါအခမဲ့
Coinbase- Bitcoin၊ ETH၊ SHIB
ရေးသားသူ: Coinbase Android
သင်၏ခေါင်းကို Bitcoins လောကသို့စတင်နိုင်ရန် ဦး စွာသင်လိုအပ်သည် အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှု၊ အားကောင်းတဲ့ကွန်ပျူတာနှင့်တိကျသောဆော့ဝဲလ်။ ဈေးကွက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Bitcoins ဝင်ငွေအတွက်အသုံးပြုသော open source application ၏အမျိုးမျိုးသော forks များကိုတွေ့ရှိနိုင်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏လိုအပ်ချက်နှင့်အကိုက်ညီဆုံးပေါ်တွင်မူတည်သည်။ သင်၏အဖွဲ့သည်ထောင်ပေါင်းများစွာသောအခြားကွန်ပျူတာများနှင့်အတူစျေးကွက်အတွင်းနှင့် Bitcoins ကိုစုဆောင်းသောငွေပေးငွေယူများကိုလုပ်ဆောင်ရန်တာဝန်ယူထားသောကြောင့် Bitcoins ကိုသတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည်လွယ်ကူသည်။ သိသာထင်ရှားသည်မှာသင်အဖွဲ့များများများလုပ်လေများသောအားဖြင့်သင်ရနိုင်သည့် Bitcoins များသော်လည်းအရာရာတိုင်းသည်လှပသည်မဟုတ်။
ယှဉ်ပြိုင်မှုပိုများလာပါကသင်၏အဖွဲ့သည်ငွေပေးငွေယူလျော့ကျစေရန်အသုံးပြုမည့်အခွင့်အလမ်းများကြောင့်အမြတ်နှုန်းလျော့ကျသွားသည်။ Bitcoins ၏ ၀ င်ငွေကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်မည်သူမျှစနစ်ကိုမထိန်းချုပ်နိုင်ပါ။ တစ်ခုတည်းသောအရာမှာကွန်ယက်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောကွန်ပျူတာအမြောက်အများရှိသည့်ခြံများဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အလင်း၏သိသာထင်ရှားသောကုန်ကျစရိတ်များပါ ၀ င်ပြီး၎င်းသည်အင်အားကြီးမားသောကိရိယာ၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုမရေတွက်ပါ။
Bitcoins များထုတ်ပေးသောအခါ၎င်းတို့ဖန်တီးထားသောအမြန်နှုန်းကိုလျှော့ချသည်။ 21 သန်း၏ကိန်းဂဏန်းရောက်ရှိသည်အထိဤအချိန်တွင်မည်သည့်အီလက်ထရွန်နစ်ငွေကြေးကိုထုတ်လုပ်နိုင်မည်နည်း။ သို့သော်ထိုငွေပမာဏကိုရောက်ရှိရန်သွားရန်အချိန်များစွာရှိသေးသည်။
ပိုမိုလွယ်ကူသောနည်းဖြင့်နည်းနည်းလေးများသတ္တုတွင်းတူးရန်နောက်ထပ်နည်းလမ်းမှာစနစ်တစ်ခုကိုငှားရမ်းခြင်းဖြစ်သည် Bitcoins တူးဖော်ရေးလုပ်ငန်း.
Bitcoins များသည်နိုင်ငံများနှင့်ကြီးမားသောဘဏ်များအတွက်ကိုယ်စားပြုသောပြproblemနာမှာဤငွေကြေးနှင့်သက်ဆိုင်သောအရာအားလုံးကိုထိန်းချုပ်ရန်တာ ၀ န်ယူသောအဖွဲ့အစည်းမရှိခြင်း၊ ၎င်းတို့ကိုရယ်စရာမဖြစ်စေသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်၊ အထူးသဖြင့် Bitcoin ဖြစ်လာသည်။ ဒါပေမယ့်ဘုံငွေကြေး ဒါဟာတကယ့်အခြားရွေးချယ်စရာမတိုင်မီသွားကြဖို့နှစ်ပေါင်းများစွာနေဆဲရှိပါတယ်။
Coinbase, Blockchain.info နှင့် BitStamp တို့သည် Bitcoin အခြေခံအဆောက်အအုံကိုကမ်းလှမ်းရန်တာဝန်ရှိသည်, အမြတ်အစွန်းအတွက်အလုပ်လုပ်သော node များဖြစ်ကြသည်, ဒါကြောင့်သူတို့ကအများဆုံးပိုက်ဆံကမ်းလှမ်းသူကို, သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အကျိုးစီးပွားအတွက်အမြဲတမ်းရွေ့လျားပေမယ့်သူတို့ကစောင်ရေသို့သူတို့ကိုငါလှည့်လည်သောသူတို့ကိုမဟုတ်, ထိုလုပ်ငန်းတာဝန်ဆော့ဖ်ဝဲကိုအထူးသဖြင့်ကျေးဇူးတင်သောသူ, မိုင်းလုပ်သားအပေါ်နှင့် သင်၏ကွန်ပျူတာ၏စွမ်းအားသည် Bitcoins များကိုတူးဖော်။ ရနိုင်သည်။
လုံခွုံရေးသုံးစွဲသူများသည်သူတို့၏အရောင်းအ ၀ ယ်များအားလုံးကိုအပြည့်အ ၀ ထိန်းချုပ်ထားသောကြောင့်မည်သူမျှခရက်ဒစ်ကဒ်သို့မဟုတ်အကောင့်များစစ်ဆေးခြင်းကဲ့သို့သောအကောင့်တစ်ခုအားငွေမသွင်းနိုင်ပါ။
ကြည်လင်သော။ Bitcoins နှင့်သက်ဆိုင်သောအချက်အလက်အားလုံးကို blockchains မှတစ်ဆင့်လူသိရှင်ကြားရရှိနိုင်သည်။ ဤငွေကြေးနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်အားလုံးရရှိနိုင်သည့်မှတ်ပုံတင်၊ ပြုပြင်မွမ်းမံ။ မပြုပြင်နိုင်သည့်မှတ်ပုံတင်။
ကော်မရှင်မရှိခြင်း။ ဘဏ်များသည်ငါတို့ပိုက်ဆံနှင့်ကစားခြင်းအပြင်၎င်းတို့အားပေးသည့်ကော်မရှင်များမှအသက်ရှင်သည်။ Bitcoins နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်သောငွေပေးချေမှုများသည်များသောအားဖြင့်၎င်းကိုပြုလုပ်ရန်ကြားခံမရှိသောကြောင့်များသောအားဖြင့်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်တို့ပေးချင်သော ၀ န်ဆောင်မှုအမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ အချို့ကော်မရှင်များကိုလျှောက်ထားကောင်းပြုနိုင်သည်။
SWIFT။ Bitcoins မှကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိမည်သည့်နေရာ၌ဖြစ်စေ၊ မည်သည့်နေရာ၌မဆိုချက်ချင်းငွေလွှဲနိုင်သည်။
တည်ငြိမ်မှု။ Bitcoins ကိုမွေးဖွားကတည်းကတစ်ယူနစ်လျှင်ဒေါ်လာတစ်ထောင်ထက်ပိုသောကိန်းဂဏန်းများကိုရရှိခဲ့ပြီးရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်၎င်းတို့သည်ဒေါ်လာရာဂဏန်းအနည်းငယ်သာရှိသည်။ ၎င်းအားလုံးသည်ထိုအချိန်တွင်ရွေ့လျားနေသော Bitcoins ၏လုပ်ဆောင်မှုနှင့်ပမာဏပေါ်တွင်မူတည်သည်။
လူကြိုက်များ။ အကယ်၍ သင်သည် Bitcoins များနှင့်လူသိနည်းသူတစ်စုံတစ် ဦး အားနည်းပညာနှင့်မပတ်သက်သူတစ် ဦး အားမေးမြန်းလျှင်စွမ်းအင်သောက်သုံးခြင်းသို့မဟုတ်အလားတူအရာတစ်ခုခုအကြောင်းပြောနေခြင်းရှိ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ကုမ္ပဏီကြီးများသည်ဤငွေကြေးကိုစတင်ထောက်ပံ့လာကြသော်လည်းနေ့စဉ်သုံးငွေကြေးဖြစ်မလာမီရှေ့ဆက်သွားရမည့်လမ်းများစွာရှိနေသေးသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » နည်းပညာ » Bitcoin, ကဘာလဲ, ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်နှင့်ဘယ်မှာ Bitcoins ဝယ်ဖို့
Cryptocurrencies သည်“ peer to peer” စနစ် (အသုံးပြုသူမှအသုံးပြုသူသို့) စနစ်အပေါ်အခြေခံသည်။ ၎င်းသည်ယခင်ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများ၏ပြ:နာများ - တတိယပါတီအတွက်လိုအပ်ခြင်းဖြစ်သည်။
cryptocurrencies ကိုတီထွင်ခြင်းမပြုမီ၊ သင်သည်အွန်လိုင်းငွေပေးချေမှုကိုလုပ်လိုသည့်အခါဘဏ်များ၊ Paypal၊ Neteller စသည်တို့ကိုငွေပေးချေရန်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
Bitcoin ၏ cryptocurrency နှင့်အတူဤပြောင်းလဲသွားသည်။ ၎င်းသည်အခမဲ့ငွေကြေးနောက်ကွယ်မှမည်သည့်ခန္ဓာကိုယ်မဆိုလိုအပ်သည်။ စောင့်ကြည့်ခြင်း၊ ထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုဆောင်ရွက်ရန်သေချာစေရန်အသုံးပြုသူများ (ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိကွန်ပျူတာထောင်ပေါင်းများစွာ) မှထုတ်လုပ်သောကွန်ယက်ကိုယ်နှိုက်ဖြစ်သည်။ အရောင်းအ။
Satoshi Nakamoto ဟုသူကပြောသည်
မစ္စတာ Craig Wright, ဒီ Satoshi မဟုတ်ပါဘူး။ ဤသူသည်ငါသုံးသော hard drive များထဲမှမတော်တဆလက်ခံသူဖြစ်ခဲ့သည်။
Finney Transaction သည် Core2Duo ram 2gb နှင့် hard disk ၈၀ ပါသည့် pc မှပြုလုပ်ခဲ့သော 80coin စာရွက်စာတမ်း PDF ဖိုင်တွဲနှင့် Moore ၏ဥပဒေနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကျွန်ုပ်၏လက်ပ်တော့ပ်မှပြုလုပ်သောငွေပေးငွေယူတစ်ခုဖြစ်သည်။ ။
Said Transaction ကိုကျွန်ုပ်၏ PC မှ Acer Aspire laptop သို့ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအမှားတစ်ခုကြောင့်ထို laptop ၏ 2,5 hard drive သို့ပို့လိုက်သည်။ ဤသူနှင့်ကျွန်ုပ်၏ဆက်ဆံရေးသည်စီးပွားဖြစ်မဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်သူ့ကိုမသိပါ၊ သူရည်ရွယ်ထားသည့်အရာများနှင့်ဤကိစ္စတစ်ခုလုံး၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။
Finney ငွေပေးငွေယူသည်ကျွန်ုပ်ပထမဆုံးပြုလုပ်သောစမ်းသပ်မှုဖြစ်ပြီး၊ IP မှတဆင့်နှင့် port 8333 အောင်မြင်ပါသည်။ ဖင်နီနှင့်ကျွန်ုပ်သည်အစည်းအဝေးတစ်ခုစီစဉ်ရန်ဖိုင်ပို့ခြင်းနှင့်ငွေပေးငွေယူများကိုဖုံးကွယ်ထားသည်။
Satoshi Nakamoto သို့ပြန်သွားပါ
Jaime Noble ဟုသူကပြောသည်
အရေးကြီးချက် - စပိန်နိုင်ငံတွင် LiviaCoins.com ကို သုံး၍ bitcoins များကိုဝယ်ယူရန်။ မြန်ပြီးရိုးရှင်းတယ်
Jaime Noble အားပြန်ပြောပါ
၃.၅ မီလီမီတာအပေါက်ကိုစမတ်ဖုန်းများသို့ပြန်ပို့ရန် Microsoft ကလိုလားသည်
Brothers Brothers နှင့် Apple ၏ Face ID ကွာခြားမှုရှိသလား။ မဖြစ်နိုင်ဘူး